संकटका सहारा - कान्तिपुर समाचार
जन्मिए नयाँ प्रविधि
कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा गरे पनि उपत्यकासहित देशभर नै संक्रमितको संख्या ह्वारह्वार्ती बढिरहेको थियो । संक्रमितको उपचारमा सहज होस् भनेर सरकारले देशैभर कोभिड अस्पताल तोक्यो तर तिनले मात्रै स्वाब संकलन र कोभिड परीक्षणको माग धान्न सक्ने अवस्था थिएन ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका ५८ वर्षीय पुरुषको शवले १८ घण्टादेखि सद्गत पर्खिरहेको थियो । शव उठाउन एम्बुलेन्स तयार थिए न व्यवस्थापन गर्ने ठाउँकै टुंगो थियो । जेठ २५ मा पोखरामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका पहिलो व्यक्तिको शव बोक्न कोही एम्बुलेन्स चालक तयार भएनन् । यही अन्योलका बीच ग२च ७००२ नम्बरको एम्बुलेन्स लिएर अमजद मियाँले ‘इन्ट्री’ मारे ।
मुलुकको आयात–निर्यातको मुख्य नाका वीरगन्ज कोरोना महामारीको पनि हटस्पट बन्यो । वैशाख र जेठमा सुरु भएको पहिलो लहरको संक्रमणले कसैको ज्यान नलिए पनि साउन पहिलो सातादेखि फैलिएको दोस्रो संक्रमणबाट पर्सामा ५३ जनाले ज्यान गुमाए ।
काभ्रेको साँगामा २०७४ सालदेखि सञ्चालित मास्क उद्योग सात महिनादेखि बन्द छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभावका कारण सर्जिकल मास्क बनाउने कच्चा पदार्थ समयमा नपाएपछि सञ्चालक शुकदेव जोशी उद्योग बन्द गर्न बाध्य भए ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेका बेला रत्नपार्कमा दिनदिनै सयौंलाई खाना खुवाउने दिन हन्ड्रेड्स ग्रुपका बब्लु गुप्तालाई एउटै चिन्ता हुन्थ्यो– भोलि कसरी खाद्यान्न जोहो गर्ने ? पुरानो परिचय नभए पनि एकदिन डिल्लीबजारका किराना पसले किशोर महर्जनले उनलाई ६० हजार रुपैयाँको खाद्यान्न उधारो पत्याए ।
डा. डम्बर खड्कालाई उनका सहकर्मी र परिवारका सदस्यले बारम्बार आग्रह गर्थे– कोरोना परीक्षण गराउनुस् । उनी भने सधैं टारिरहन्थे । हेर्दाहेर्दै सहकर्मी चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मी धमाधम संक्रमित हुन थाले । एक जना वरिष्ठ चिकित्सकको त ज्यानै गयो ।
मैले प्राध्यापक अभि सुवेदीलाई सोधें– यो कोरोना अवधिको एक वर्षमा तपाईंले सबैभन्दा धेरै याद गर्ने कुरा के हो ? उनले झटपट जवाफ दिए– लकडाउन । मैले जाजरकोटकी शारदा बस्नेतलाई फोन गरें र उसैगरी सोधें– तपाईंले यो एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै के कुरा सम्झिनुहुन्छ ? उनले पनि लकडाउन नै भनिन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमणले बाहिरी विश्वझैं नेपाली समाज पनि एकैसाथ आक्रान्त बनिरहेका बेला सधैंभरि योजना र सपनाको भर लिएर हिँड्ने म्याग्देली महावीर पुन कता होलान् ?
‘यसरी पुनर्जीवन पाएँ’
सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा सामाजिक र भौतिक दूरी ख्याल गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेको थिएँ । भिनाजु दुईवटै किड्नी फेल भएर छाउनी अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो । साताको दुईपटक डायलसिस गर्नुपर्थ्यो । त्यसको जिम्मेवारी मेरै काँधमा थियो । सांसद भएकाले जनताबीच गइरहनुपर्ने, परिवारमा सावधानी अपनाउनुपर्ने र भिनाजुलाई मेरो कारणले कोराना नसरोस् भनेर सचेत रहनुपर्ने अवस्था थियो ।
सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूले अनलाइनबाट विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका छन् । लोक सेवा आयोगले अनलाइन दरखास्त लिन्छ । नेपाली सेनाले अधिकृत भर्ना छनोटमा यसपालि अनलाइनबाट पनि आवेदन मागेको छ ।
क्वारेन्टाइनमा रहेका बाँके नरैनापुर गाउँपालिका–५ का ६ जनामा एकै दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि वडाध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्य आत्तिए । संक्रमितलाई कहाँ राख्ने ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अब वडा नै ‘हटस्पट’ बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता र त्रास थपियो । ती संक्रमितलाई जेनतेन नेपालगन्जको आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्थापन मिलाए तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा संक्रमित थपिँदै गए ।
सर्वसाधारणलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन भनेर खोलिएको जिल्ला अस्पताल सिमखेतमा आउने बिरामीको संख्यान्यून हुन्थ्यो । अस्पताल प्रांगणसँगै जोडिएका निजी मेडिकलहरूमा भने मानिसको घुँइचो लागेको हुन्थ्यो । बिरामीको चाप थाम्न निजी मेडिकललाई भ्याइनभ्याई थियो ।
उनले बोरामा भात राखेको कहिल्यै देखेका थिएनन् । दाल कोकको बोतलमा पनि हालिन्छ भन्ने थाहा थिएन । तरकारी र अचार प्लास्टिकको झोलामा देख्दा उनी अचम्म पर्थे । ‘अझ गाडीले पोकापन्तुरामा ल्याएर छाडेको खानेकुराले छाक टार्नुपर्छ भनेर त कल्पना पनि गरेको थिइनँ,’ सशस्त्र प्रहरी बलका असई भक्तवीर चौधरीले भने ।